> Resource> iPod> Olee na-etinye Music on iPod enweghị erasing Ihe ọ bụla
Achọrọ m tinye songs n'ime m iPod si dị iche iche na kọmputa ma oge ọ bụla m na-agbalị tinye si dị iche iche na kọmputa ọ chọrọ ka ihichapụ m music. Amaara m na e a kwere omume ụzọ tinye music enweghị erasing ma achọtaghi otú. Biko nyere.
Ọfọn, nke ahụ bụ eziokwu. Ọ bụ omume na-etinye music on iPod na retaining gara aga songs. Ma, i kwesịrị enyemaka ụfọdụ. Ebe a bụ mma iPod music transfer ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Windows). Dị ka a Mac onye ọrụ, biko atụgharị Wondershare TunesGo (Mac). Na nke a iPod music transfer ngwá ọrụ, ị na-enwe ike itinye music si iTunes Ọbá akwụkwọ na ha na kọmputa gị iPod seamlessly. Ọzọkwa, ọ na-eme ihe ọ bụla na songs kwukwara na mbụ. Nke ahụ bụ ikwu, aga na songs dịghị mgbe a ga-ehichapu mgbe ị tinye ọhụrụ songs gị iPod.
Download a iPod music transfer ngwá ọrụ mara otú tinye music on iPod.
Cheta na: Biko ego gị iPod na iOS n'ihu na-eji nke a iPod music transfer ngwá ọrụ.
Otú e si etinye music on iPod
Na-ahọrọ nri mbipute a iPod music transfer ngwá ọrụ. Wụnye na ẹkedori ya na gị na Windows kọmputa ma ọ bụ Mac. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga na-agbalị na-etinye music na gị iPod na Windows version.
Mgbe launching a iPod music transfer ngwá ọrụ, ị ga-ahụ nke a window na kọmputa gị na ihuenyo.
Nzọụkwụ 1. Gbalịa Ijikọ iPod na kọmputa na iji eriri USB
N'ihu na-agbakwunye music ka iPod, i kwesịrị iji eriri USB jikọọ gị iPod, dị ka iPod aka 5, na kọmputa. Mgbe ahụ, gị iPod ga-egosi na isi window.
Nzọụkwụ 2. Tinye music ka iPod
Nke a iPod music transfer ngwá ọrụ na-enye gị ike na-agbakwunye music faịlụ ma ọ bụ listi ọkpụkpọ na iTunes Ọbá akwụkwọ na na kọmputa gị iPod.
Na-etinye music on iPod enweghị iTunes, ị nwere ike pịa "Media" ke ekpe sidebar. On n'elu ụlọ mmanya na nri ebi ndụ, họrọ "Music". Mgbe ahụ, pịa "Tinye". Na faịlụ nchọgharị window, na-agagharị kọmputa gị ga-gị chọrọ music faịlụ. Tinye ha gị iPod. Iji tinye music nchekwa, ị nwere ike pịa triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye nchekwa".
Cheta na: Wondershare TunesGo (Mac) anaghị akwado na-agbakwunye music ma ọ bụ listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPod.
Kama na-agbakwunye music faịlụ, ị bụ ike nke na-etinye listi ọkpụkpọ site na iTunes na kọmputa gị iPod. Na-ekpe kọlụm, pịa "Playlist" na-egosi na playlist window na nri ebi ndụ. Pịa triangle n'okpuru "Tinye". Abụọ nhọrọ egosi elu na esiri-ala ndepụta. Ha na-"Tinye iTunes Playlist" na "Tinye playlist site na kọmputa."
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi tinye music ka iPod enweghị iTunes, ị nwere ike họrọ "Tinye playlist site na kọmputa." Ịnyagharịa ka playlist na ị ga-amasị tinye ma tinye ya.
Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ mmasị nkịtị na smart listi ọkpụkpọ na iTunes Ọbá akwụkwọ, ị kwesịrị ị na họrọ "Tinye iTunes Library". Na mmapụta window, niile iTunes listi ọkpụkpọ na-e. Naanị nne Mmetụta anya gị chọrọ listi ọkpụkpọ. Pịa "OK" na-etinye listi ọkpụkpọ na gị iPod.
Ọ gwụla. Music e atụkwasịkwara gị iPod. E wezụga, ochie songs bụ ka e nwere, na-adịghị na ha? Na TunesGo, gị mgbe mkpa ka nchegbu banyere music ọnwụ n'oge music ebufe.
Gbalịa TunesGo ịmụta otú etinye music on a iPod.
Iyi Music ka iPod si PC
Top 5 iPod ka Computer Nyefee Ngwaọrụ
Nyefee iPod Playlist ka Computer Mfe